Ukuhlangana kweenkcubabuchopho: kwiNkomfa yoPhandonzulu lokuFundisa nokuFunda (SoTL 2018) | Language Centre
Posted on 12/11/2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research
Kwihlabathi elilangazelela iindlela ezintsha zokufikelela kubafundi, iNkomfa yoPhandonzulu lokuFundisa nokuFunda ibe lithuba elihle kakhulu kubafundisi-ntsapho lokuphonononga nokwabelana ngophando lwabo kwakunye nokucamngca ngeendlela zokufundisa. Inkomfa ye-11 ye-SoTL yaminyaka le, ibisindlekwe ekupheleni kukaOkthobha licandelo elingugxa weZiko leeLwimi, iCandelo lokuKhulisa ukuFundisa nokuFunda. Le nkomfa ibe lithuba elihle leZiko leeLwimi lokwabelana ngelikufumanisileyo ngokufundisa nokufunda kusetyenziswa imbono yesiseko sobomi: ulwimi.
UGqir Kabelo Sebolai, ongusekela-mlawuli kwiZiko leeLwimi, wabelane ngoko athe wakufumanisa xa ebephanda oko kubizwa ngokuba yi“articulation gap” (isikhewu sengcaciso). Kwiprezenteyishini yakhe, ‘Revisiting the Role of Language Ability in Academic Performance: The Case of Stellenbosch University’ (Ukuhlalutywa kweNdima yoKubanakho koLwimi kwiMfezekiso yeMfundo: uPhandomeko kwiYunivesithi yaseStellenbosch), ucacise ngelithi esi sikhewu sengcaciso sasinxulumene nokukreqa okuphezulu nomyinge wokungagqibi kwabafundi izifundo zabo okusezantsi kwiiyunivesithi zaseMzantsi Afrika. UKabelo udandalazise ukwalamana okuluqilima phakathi kokuphumelela kwabafundi iimviwo zesiNgesi kwiBakala le-12 kunye nokufezekisa kwabo izifundo zabo kwiYunivesithi yaseStellenbosch – nkqu nakwimingxilo enganxulumenanga kakhulu nokusetyenziswa kolwimi!
Iqela lophando leeNkonzo zokuTolika kwiZiko leeLwimi liqhayise ngecebo lalo lokuphanda ukudluliselwa kwentsingiselo eklasini kwiprizenteshini ethi, ‘To Kill a Canary: Interpreters and Educational Practices at Stellenbosch University’ (UKwandisa iNtsingiselo: Iitoliki kunye neeNdlela zeMfundo kwiYunivesithi yaseStellenbosch). Oku kungenxa yokuba iitoliki zeSU kumele zicacise intsingiselo yentetho yomhlohli rhoqo xa zitolikela kolunye ulwimi. Zithi zibe nemvakalelo enkulu yokuba ingaba loo ntsingiselo yakheke njani. Ngoku phonononga kwalo ukuba ingaba abahlohli bawudlulisa njani umyalezo wabo, eli qela lithe laphawula amanqaku angundoqo athi enze ukuba umyalezo uvakale okanye ungavakali, anjengokwakhiwa kwengxoxo kunye nokungqamana komyalezo. Oku kwathi kwanika ingqiqo ethile abahlohli yokuba bangazimilisa njani izifundo zabo ukuze zincede abafundi bayilandele ngcono ingxoxo yaseklasini.
UFiona Stanford weZiko leeLwimi osebenzisana noGqir Ilse Rootman-Le Grange weFakhalthi yeNzululwazi uthe gqabagqaga ngeprojekthi elilinge ethi: ukuhlanganiswa kokufundiswa kwezakhono zokufunda kumngxilo wenzululwazi. Kwiprizenteshini yabo esihloko sithi: ‘Autonomy Tours: Reflecting on the First Offering of Science in Context’ (Utyelelo kukuZimela: UkuCamngca ngoNikezelo lokuQala lweNzululwazi ngokweMeko). UFiona no-Ilse bacamngca ngemodyuli entsha enyanzelekileyo kubafundi bonyaka wokuqala kwisidanga seBhatshelari kwiNzululwazi (BSc) bephonononga imiceli-mngeni nemivuzo yomfuziselo ophuhlisiweyo osekelwe indlela yokuphuhlisa izakhono zokufunda kuloo mngxilo.
Kubalulekile ukuba amaziko anjengeZiko leeLwimi azibandakanye kwimicimbi eloluhlobo. Ingekuko ukubonwa nje neenkcubabuchopho ezigqwesileyo kwimfundo, kodwa ibe kukuba negalelo kwimicimbi engokufundisa nokufunda esoloko inika umdla iphuhla ngokunjalo.
Language CentreArticles in isiXhosa Dialogos Recent news ResearchUkuhlangana kweenkcubabuchopho: kwiNkomfa yoPhandonzulu lokuFundisa nokuFunda (SoTL 2018)